Hyundai ထုတ်လုပ်သူများအတွက်သော့ Shell | Hyundai စက်ရုံနှင့်ထောက်ပံ့သူများအတွက် China Key Shell
Hyundai အတွက်သော့ Shell
Kia RIO အတွက် Hyundai Solaris Picanto Elantra အတွက်ရော်ဘာခလုတ်ခုံ Pad Verna Sportage Flip Remote Key Shell Blank Case
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အခြေအနေ ၁၀၀% အသစ်အရောင် - ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းခလုတ် - ၃ ခလုတ်များအဓိကသော့ချက် - အရွယ်အစား - ၃.၄ စင်တီမီတာ * ၂.၅ စင်တီမီတာ ၀.၄ စင်တီမီတာ (L * W * H) အလေးချိန် - ၁.၅ ဂရမ်လက်ကားနှင့်လက်လီရောင်းဝယ်မှု - ထူးခြားချက်များ - 1.Best ကျိုးနေသောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခတ်ထားသောသော့များဖြင့်သော့တစ်ခုအစားထိုးခြင်း။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. ဒေသခံသော့ခတ်သူ / ကုန်သည်မှဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရယူပါသို့မဟုတ်သင်၏မူလမူရင်းနှင့်ဓါးကိုလဲလှယ်ပါ။ ၄။ အတွင်းပိုင်းအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို (ရွေ့ပြောင်း / transponder ချစ်ပ်ပါဝင်သည်) ကိုမူလအဝေးမှယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သော့သို့ထည့်ပါ။
3/4 ခလုတ်များ Hyundai HB20 SANTA FE IX35 IX45 IX45 Accent I40 အတွက်အဝေးထိန်း Key Shell Fob Key Case
3/4 ခလုတ်များ Hyundai HB20 အတွက်အဝေးထိန်း Key Shell Fob Key Case အခွအေနေ - 100% Brand New အရောင်: Black Button: 3/4 Buttons Key Blank: အဘယ်သူမျှမဓါးသွား Transponder Chip: အီလက်ထရောနစ် / ဘက်ထရီမရှိ။ ပျက်စီးနေသောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခလောက်များဖြင့်သော့ကိုအစားထိုးခြင်း။ ၂ ။ NoInclude အဓိကဓါးတပ်ဆင်မှု - Hyundai HB20 အတွက် (ကျေးဇူးပြုပြီးသော့ဓါးနှင့်အခွံကိုသေချာသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ ) ix35 ix45 နှင့်အတူတူပင်သတ်မှတ်ထားသောအခြားမော်ဒယ် ...
Hyundai I20 I30 IX35 I35 Accent Solaris အတွက်3Button Flip Remote Auto Car Key Shell Kia cerato ceed
Hyundai I20 I30 IX35 I35 Accent Solaris အတွက်3Button Flip Remote Auto Car Shell အခွအေနေ - 100% Brand New Features: ဝေးလံခေါင်သီသော့သောကားဒီဇိုင်း: ဖက်ရှင်ကားပုံစံပစ္စည်း: abs + metal အရောင်: ပုံကိုပြသ Button : ၃ ခလုတ်ခလုတ်များ၊ ဘက်ထရီမရှိသောအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းမရှိ၊ အလေးချိန် ၄၀ ဂရမ် Fitment: Hyundai နှင့်အခြားမော်ဒယ်များအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအလွတ်နှင့်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသူများ၏တူညီသောအသေးစိတ်အချက်များ ... အပိုင်းများ။
၂/၃/၄ Hyundai Kia Carens အတွက်ခလုတ်များ Remote Control Key Cover အဖုံး Fob Case Keyless Entry
2/3/4 Hyundai Kia Carens အတွက်ခလုတ်အဝေးထိန်းခလုတ်ခုံအဖုံး Fob Case Keyless Entry အခြေအနေ: 100% Brand New Color: ပုံတွင်ပြသထားသည့်အတိုင်း Button:3Buttons Key Blade: အရွယ်အစား: ၃.၄cm * 2.5cm0.4cm (L) * W * H) အလေးချိန် - ၁.၅ ဂရမ်လက်ကားနှင့်လက်လီ - နှစ်မျိုးလုံး ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. ဒေသခံသော့ခတ်သူ / ကုန်သည်မှဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရယူပါသို့မဟုတ်သင်၏မူလမူရင်းနှင့်ဓါးကိုလဲလှယ်ပါ။ အတွင်းပိုင်းကိုယူပါ။